Maxaa kala socotaa Isbedelka dhanka Cimilada ah ee laga dareemay magaalada Muqdisho? | Entertainment and News Site
Home » News » Maxaa kala socotaa Isbedelka dhanka Cimilada ah ee laga dareemay magaalada Muqdisho?
Maxaa kala socotaa Isbedelka dhanka Cimilada ah ee laga dareemay magaalada Muqdisho?
daajis.com:- Shaki kama taagnaa inuu jiro isbedel dhanka cimilada oo wayn, iyadoo dadka ku nool Magaalada Muqdisho ay dareemayaan isbedelkaan ku yimid dhanka Cimilada Somaliya.
Heerkulka Muqdisho ayaa maraya 23, markii hore wuxuu ahaan jiray 34 illaa 30 inta u dhaxeysa, balse hadda farqi wayn ayaa u dhaxeeya.